ဗဟုသုတ – Alanzayar
အခုဝင်လာတဲ့အချိုမှုန့်အသစ်မှာ ဒါတွေပါလာတယ် အချိုမှုန့် စားသူများ see more…. အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို အခုဝင်လာတဲ့အချိုမှုန့်အသစ်မှာ ဒါတွေပါလာတယ် အချိုမှုန့် စားသူများ see more…. အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို အခုဝင်လာတဲ့အချိုမှုန့်အသစ်မှာ ဒါတွေပါလာတယ် အချိုမှုန့် စားသူများ see more…. အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို အခုဝင်လာတဲ့အချိုမှုန့်အသစ်မှာ ဒါတွေပါလာတယ် အချိုမှုန့် စားသူများ see more…. …
June 4, 2022 June 4, 2022 - by admin - LeaveaComment
မိန်းကလေးတွေ ပျင်းတိုင်း စဉ်းစားမိလေ့ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာ(၄)မျိုး မိန်းကလေးတွေက ကမ္ဘာ့အထူးဆန်းဆုံး သတ္တဝါတွေလို့တောင် အမှတ်မှားလောက်အောင် သူတို့ အကျင့်တွေက တမူ ထူးခြားလွန်းလှပါတယ် …။ ရစ်တဲ့နေရာမှာ နှစ်ယောက်မရှိအောင် တော်ကြတာ များသလို ပျင်းတဲ့အခါမှာလည်း ဖြေရခက်လောက်အောင် အတွေးများတတ်တဲ့ သူလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ် …။ သူတို့တွေ ပျင်းနေပြီဆိုတာနဲ့ ဒီအရာတွေကို တွေးနေတတ်ကြပါတယ်နော် …။ (၁) ဘာစားရင် …
Battery အိုးတွေပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ သိထားသင့်သော ကိန်းဂဏန်းများ(ဗဟုသုတအဖြစ် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်)
Battery အိုးတွေပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ သိထားသင့်သော ကိန်းဂဏန်းများ(ဗဟုသုတအဖြစ် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်) အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ Battery အိုးတွေပေါ်မှာ CCA ဆိုတဲ့ စာလေးပါလာတာ မိတ်ဆွေတို့သတိထားမိကြ လားမသိ။ အဲဒီ CCA ဆိုတာဘာလဲ တချို့လည်းလာမေးကြပါတယ်။ CCA ဆိုတာဘာလဲ ? CCA ဆိုတာ Cool Cranking Ampere ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ -18°C (or) …
သင့်အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပါ အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို သင့်အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပါ အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို သင့်အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပါ အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို သင့်အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပါ အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို သင့်အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပါ …
သားမွေးတိုင်း မိန်းမမြတ် မဟုတ်သလို သမီးမွေးတိုင်းလည်း မိန်းမယုတ် မဟုတ်ပါဘူး တချို့က ပြောကြတယ် ဘုန်းကံ မရှိလို့ သမီး မိန်းခလေး မွေးတာတဲ့ ကျွန်မတော့ အဲ့ဒါကို လက်မခံပါဘူး ပေတေလေလွင့်ပြီး ဆိုးသွမ်းနေတဲ့ သားတွေကို မွေးထားမိတဲ့ မိခင်တွေဆို ငါဟာမိန်းမမြတ်လို့ ဂုဏ်ယူနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး … သား ယောက်ျားလေး မွေးရင် သာသနာဘောင် သွတ်သွင်းခွင့် …
ဒူးရင်းသီးနှင့်တွဲဖက်မစားသင့်သော အစားအစာများ ကျမ္မာရေးအတွက် အများသိစေရန် shareပေးခြင်းဖြင့် ဇီဝိတဒါန ကုသိုလ်ယူပေးကြပါနော်…. ဒူးရငျးသီးနှငျ့တှဲဖကျမစားသငျ့သော အစားအစာမြား အခုအခြိနျက ဒူးရငျးသီးတှေ ဖွိုငျဖွိုငျပေါမြားနခြေိနျဆိုတော့ ဒူးရငျးသီးခဈြသူတှေ အပြျောဆုံးအခြိနျပဲဖွဈမယျလို့ထငျပါတယျ ဒါမဲ့ “အသှားမတျောတဈလှမျး အစားမတျောတဈလုပျ” ဆိုသလို သတိမထားမိပဲ တှဲဖကျစားသုံးမိရငျ ကနျြးမာရေးကို ဆိုးဝါးစှာထိခိုကျနိုငျတာမို့ ဒူးရငျးသီးနှငျ့တှဲဖကျမစားသုံးသငျ့သော အစားအစာမြားကို သတိတရတငျပေးလိုကျပါတယျ ဒူးရငျးသီး နှငျ့ အရကျ/ဘီယာ/ ဝိုငျ တှဲဖကျစားသုံးခွငျးအားဖွငျ့ …
သင့်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင် အိမ်မှာ ဒီပန်းပင်(၅)မျိုးကို စိုက်ပါ
သင့်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင် အိမ်မှာ ဒီပန်းပင်(၅)မျိုးကို စိုက်ပါ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အိမ်မှာ ဒီပန်းပင်တွေ စိုက်ပါဖော်မလင်၊ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်၊ အမိုးနီးယားဓာတ်ငွေ့တွေဟာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ ရှိတဲ့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် အိမ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာ အကူအညီပေးနိုင်တဲ့ အရာတွေ ရှိပါတယ်အိမ်ထဲမှာ စိုက်ထားလို့ရတဲ့အပင်တွေက အိမ်တွင်းက လေထုညစ်ညမ်းမှုတွေနဲ့ ဓာတုပ္စည်းတွေကို (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက် စုပ်ယူ ပစ်နိုင်ပါတယ်အိမ်ထဲမှာ စိုက်လို့ရတဲ့ အပင်လေးတွေက …
facebook သုံးနေတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း အထူးသိထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေး fbသုံးနေ တဲ့မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အနည်းငယ်သာပြောင်း၍ရေးပါသည် …. ။ တစ်နေ့ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် လူလတ်ပိုင်းဓာတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အကောင့်တစ်ခု မက်ဆင်ဂျာကနေညီမလေး အစ်ကိုစကားနည်းနည်း ပြောချင်လို့ ရလား “ဆိုပြီးစာဝင်လာတယ်။ အကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ လို့ရေးမိလိုက်တာနဲ့ဗွီဒီယိုကော ခေါ်တာခံလိုက်ရတယ်။ရုပ်ဖြောင့်သလောက် အပြော ကောင်းလွန်းလှတဲ့သူ့ စကားတွေကြားမှာဖုန်းကို ပိတ်မပစ်ရက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ”အပျိုလား” ဆိုတဲ့သူ့စကားကကျမကို …